Minions Holiday Special (2020) | MM Movie Store
ကိုဗဈကွောငျ့ခရီးမထှကျရလို့စိတျညဈနတေဲ့လူတှကေိုပြျောရှငျစဖေို့ Minions လေးတှလောပါပွီ။Holiday Special အနနေဲ့ Minions ဇာတျလမျးတိုလေး(၄)ပုဒျကိုရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။Minionsလေးတှကေိုမွငျတာနဲ့ ဇာတျလမျးလေးတှကေ ဘယျလိုဖွဈမယျဆိုတာကိုသိနကွေမယျလို့ထငျတာကွောငျ့ ထှထှေထေူးထူးမပွောတော့ပါဘူး။
ဇာတျလမျးတိုလေးတှဖွေဈတဲ့အတှကျ . နညျးနညျးလေးပွောပွလိုကျရုံနဲ့ အနှဈအရသာလြော့သှားနိုငျတာမို့ မိမိဘာသာဒီဇာတျလမျးလေးကိုဒေါငျးကွညျ့ကွပါကုနျ။အခုကားလေးကိုကွညျ့ပွီး တဈရကျတာကိုပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးလိုကျနိုငျကွပါစေ။
ကိုဗစ်ကြောင့်ခရီးမထွက်ရလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေကိုပျော်ရွှင်စေဖို့ Minions လေးတွေလာပါပြီ။Holiday Special အနေနဲ့ Minions ဇာတ်လမ်းတိုလေး(၄)ပုဒ်ကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။Minionsလေးတွေကိုမြင်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေက ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိနေကြမယ်လို့ထင်တာကြောင့် ထွေထွေထူးထူးမပြောတော့ပါဘူး။
ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် . နည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်ရုံနဲ့ အနှစ်အရသာလျော့သွားနိုင်တာမို့ မိမိဘာသာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုဒေါင်းကြည့်ကြပါကုန်။အခုကားလေးကိုကြည့်ပြီး တစ်ရက်တာကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းလိုက်နိုင်ကြပါစေ။
The Great (Season 1) အပိုငျး (၉)
Fighting Immortal Statue ( 2020 )